Garee cimaa torban kanaa xinxalaan kubbaa miilaa keenya Gaarz Kruuks adda baaseen walii galtuu? - BBC News Afaan Oromoo
Taphataan Totanhaamii fi Maanchistar Yuunaayitid duraanii Gaarz Kruuks taphoota torbanirraa taphattoota cimaa jedhe filateera.
Maanchistar Siitiin garee Roy Haadsan Kristaal Paalaas 5fi 0'n haleele mataa kilabootaa yeroo ta'u, Maanchistar Yunaayitid illee tapha cimaan Saawuzampitan 1fi 0'n mo'e tapha jaha irraa qabxii 16 walitti qabe.
Galchiiwwan sadii Alvaaroo Moraataa galcheen Chalsiin Stook Siitii 4 fi 0'n akkasumas Liivarpuul tapha Vaardiin penaaliitii galchuu dhabeetti Leestar 3fi 2'n irra-aane.
Evartan qabxii fedhu Bornmaawuz 2fi 1'n injifate yoo argatu, Waatford Swaansii 2 fi 1, Braaytan Niwkaastil 1fi 0 akkasumas Barnleey fi Haadarsfild galchii malee adda bahan.
Yaada taphataa filadhe jala argattu.
Karra eegaa: Siimon Minyoleet (Liivarpuul)
Goodayyaa suuraa Bara dorgommii 2013-14’tti Livarpuul erga seene, Siimon Minyoleet rukuttaa adabbii xumuraa (penaaliitii) 15 itti rukutame keessaa torba deebise; karra eegaa kamuu caalaa
Akka kootti Yargan Kloopp qooda taphattoota cimaan qabxii argatuu mala garuu ittisaa dadhabaan kana hunda balaarra buuse.
Haga ammaa lama kan itti seene Minyoleet lafa taphattoota ittisaatti bakka banaa uumameen galchiif saaxilame. Waan Vaardii irratti raawwateen Minyoleet, bahuu dhabuun isaa carroomuus penaaliitii qabachuun gareen isaa qabxii sadii akka argatu taasise. Diddiimoon qabxii kana argachuu qabuu? Lakki - garuu haqni as keessa maal godha?
Ittisaa - Sizaar Azpilikuweettaa
Goodayyaa suuraa Ittistoota Pirimeerliigii kaanin yeroo wal bira qabamu Azpilikuweettaan tumsa(assist) dachaa lama taasise(afur)
Azpilikuweettaan kilabiin isaa akka mo'u taasisaa jira. Kubbaan isaa duraa, akka yaada kootti, kubbaa bareedduu taphichaati. Taphataan garee biyya Speen ittisa Stook addaan hireeti Alvaaroo Moraataan galchii duraa akka galchu taasise.
Ittisaa: Fil Joons (Maanchistar Yunaayitid)
Goodayyaa suuraa Bara dorgommii baranaa Ittisaa kamuu caalaa tapha Fil Joons taphateerratti galchiin kilabii isaa irratti hin galle (shan – Erik Baayii fi Antoniwoo Vaalensiyaan qooddatu)
Kuni ittisaa afur Yunaayitidiin waan dhufee ta'uus gidduudhaa kan kana qajeelchaa ture Fil Joons dha. Yuunaayitid yoo waancaa fudhachuu adeema ta'e taphataan kuni ga'umsa isaa irraa hanqachuu hin qabu.
Ittisaa- Adriyaan Maariyaappaa (Waatford)
Goodayyaa suuraa Maariyaappaan taphoota irra aaneera (sadii hiriiree lama) akkuma bara dorgommii darbe (torba hiriire lama)
Garee 1 fi 1 wal qarqabe keessatti akkuma ittisaa garee kamuu rifachuu mala. Haa ta'u malee, Adriyaan Maariyaappaa ija jabaate tapha injifate. Taphataa Waatford Taami Abrahaam ittisuun isaa qabxii akka argatan taasise.
Utubaa - Leeroy Saane (Maanchistar Siitii)
Goodayyaa suuraa Bara dorgommii baranaa Leeroy Saanen kubbaa kallattii eeggatte torba rukute shan galche
Galchii tokkoo fi tumsi lama qabu garuu cimina isaa agarsiisuu dhiisuu mala.
Utubaa - Kristiyaan Eriksan (Totanhaam)
Goodayyaa suuraa Lammiin Denmaark Kristiyaan Eriksan yeroo ammaa taphataa galchii hedduun dursaa jiru dha
Haguma Kutinihoon Liivarpuuliif ta'e EriksanTotanhaamiif guddaa barbaachisa. Taphni isaaniis hammana addaa miti. Lamaanuu kubbaa miila jala to'achuun kan rukutamuuf jedhu, dheeraas ta'e gabaabaa, hubachuun galchuu jaallatu. Galchiin Westhaam irratti galche rakkisaa ta'uus bareeche galche.
Utubaa: Filippee Kutinihoo(Liivarpuul)
Goodayyaa suuraa Erga Kutinihoon hiriiruu eegale (16) taphataa kamuu caalaa sanduuqaan ala hedduu galche
Kutinihoon deebi'eera. Yeroo Leestar taphatti deebi'u jettee yaaddutti taphataan lammii Biraazil keessa buuse abdii akka horatan taasise.
Utubaa - Kevin De Bruuyna (Maanchistar Siitii)
Goodayyaa suuraa Fulbaana 2015’tti Siitii erga seene as De Bruuynan, taphataa kamuu caalaa tumse (30)
Maqaa Kevin De Bruuyna osoo hin kaasin tapha Maanchistar Siitiin taphate keessa demuun nama dhiba. Gumaacha galchii fi tumsa Yaayyaa Ture bakka buusuun Siitiif hojii cimaa ta'uus, De Bruuynan duwwaa sana duucheera. Kubbaan Aguweroof dabarse ajaa'iba ture.
Jifataa - Umar Niyaas (Evartan)
Goodayyaa suuraa Seenaa kubbaa Ingiliish keessatti taphataan tapha hedduu irratti waliitti aansee galche dha
Yeroo Evartan Romeluu Lukaakuu bakka buusuuf dhamahaa jirutti, Umar Niyaas ol bahe mul'ate. Niyaasin Haalif yeroo taphatu nan yaadadha. Amma garuu kan biraa ta'eera.
Jifataa - Alvaaroo Moraataa (Chalsii)
Goodayyaa suuraa Chalsiif taphoota pirimeerliigii Ingilizii jalqabaa jaha keessatti Moraataa caalaa kan qooda fudhate hin jiru (Saddeet, galchii jaha, tumsa lama)
Mootichi qajeele. Diyaagoo Koostaan gara Atletikoo Maadriid deemeera. Deeggartoonni Staamford Briijitti jifataa gidduu fi ija ta'e leellisan qabu. Tapha Stook irratti ajaa'ibuma ture.
Jifataa - Haari Keen (Totanhaam)
Goodayyaa suuraa Keen daqiqaawwan muraasa keessa hedduu galchuun pirimeerliigii keessatti gurra horate
Kubbaa bareeda Deli Aliin rukute Haari Keen mataan keessa buuse. Daqiiqaa muraasa keessa akka hin taane godhan. Jarri West Haam maal gochuu danda'u ture?